विदेशमा तिरेअनुसारको सेवा पाउँछन् त अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले ?
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार ०५:०५:००
बीबीसी । धेरै भन्दा धेरै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउने मुलुकहरुको प्रतिस्पर्धामा पछिल्लो समय क्यानडा पनि धेरै अगाडि आइसकेको छ । तर यसरी अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुबाट महङ्गो शुल्क उठाइरहेका देशले वास्तविकतामा त्यस अनुरुपको सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छन् कि छैनन् ?
यसबारेमा २२ वर्षीय भारतीय नागरिक जोबनदिप सन्धुले आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् जो अत्यन्तै मिहिनेती व्यक्ति हुन् । क्यानडाको ओन्टारियोमा टेक्निकल इन्जिनियरको पढाइ गरिरहेका उनी कलेज शुल्क तिर्न करिब फुल टाइम ट्रक चलाउने काम गर्छन् । आफूसाथै भाइको पढाइको बन्दोबस्त पनि मिलाउनु पर्ने भएपछि उनले पूरै समय काम गर्न सुरु गरेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘म काम गर्नु कुनै अपराध होइन भन्ने सोच्थेँ ।’ यसरी केही समय अगाडि मात्र उनी अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीका रुपमा बढी समय काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । उनको भिसामा पनि उनले क्याम्पस बाहिर हप्तामा केबल २० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर कुनै समय उनले एक हप्ता ४० घण्टा समेत काम गरे । उनका अनुसार अभिभावकले दाजु भाइकै पढाईको खर्च बेहोर्न नसक्ने भएकाले उनले यस्तो बाटो अपनाएका हुन् । यसक्रममा एक दिन ट्रक चलाउँदै गर्दा उनलाई एक पुलिस अधिकारीले बोलाएर सोधपुछ गर्दा उनले सबै कुरा सत्य बताए । उनी भन्छन्, ‘मैले यहाँ बसे वापद् सबै कर तिरिरहेको छु यसकारण मलाई म वैध रुपमै काम गरिरहेको छु भन्ने थियो । यसैले मलाई झुटो बोल्नुपर्ने आवश्यकता लागेन ।’ तर पक्राउ परिसकेपछि अहिले उनले वकिलको सहायता लिँदै अदालतमा लड्नु परिरहेको छ । यसरी सन्धुको गिरफ्तारीपछि अन्य थुप्रै अधिवक्ताहरुले पनि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई काम गर्ने व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने पहल गरेका छन् ।
वास्तवमा सन्धु मात्र नभएर विदेशमा पढ्न गएका हजारौँ विद्यार्थीले कलेजको महङ्गो शुल्क तिर्न यसरी नै संघर्ष गर्नुपर्छ । क्यानडामा मात्र अहिले ५ लाख भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरु छन् भने अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको शिक्षा शुल्क देशभर ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यता स्वदेशी विद्यार्थीहरुलाई भने १४ प्रतिशतले मात्र ट्युसन फी बढाइएको हो । यस्तोमा क्यानडा पुगेका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले स्थानीय भन्दा चार गुणा बढी तिर्नु परिरहेको छ । क्यानडामा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि यस किसिमको समस्या देखिएको छ । जस्तै अमेरिकाको सेन डिएगोमा २० प्रतिशत विद्यार्थी अमेरिका बाहिरका रहेका छन् र वार्षिक ४० हजार डलर भन्दा धेरै पढाइ शुल्क तिर्छन् जुन अमेरिकी दर भन्दा तीन गुणा महङ्गो हो । त्यस्तै बेलायतको युनिभर्सिटी अफ म्यान्चेस्टरमा पनि अधिकांश विद्यार्थी विदेशबाट भित्रिने गरेका छन् र उनीहरुले पनि वार्षिक १८ हजार ५०० पाउन्ड ट्युसन फि तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन स्थानीय विद्यार्थीको तुलनामा दुई गुणा बढी शुल्क हो ।
यसरी सरकारले शिक्षा खर्चमा कटौति गरिरहेका बेला धेरै संस्थाका लागि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु नै राजस्वको महत्वपूर्ण श्रोत रहँदै आएकाले पनि यो समस्या बढ्दै गएको बताइएको छ ।
क्यानडा विश्वभरका विद्यार्थीहरुका लागि छैटौँ सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यमा पर्छ । यसमा सबैभन्दा शिर्षमा अमेरिका, बेलायत, चीन, अष्ट्रेलिया र फ्रान्स रहेका छन् । यसरी स्नातक उत्तीण गरिसकेपछि वर्क पर्मिट पाउने भएकाले पनि विद्यार्थीहरुले क्यानडा राजिरहेका छन् । तर के उनीहरुले आफूले बुझाएको शुल्क अनुसारको सेवा सुविधा पाइरहेका छन् त ?
विश्वव्यापी मामिलाको मन्त्रालयले अनुमान गरे अनुसार २०१४ मा मात्र अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले क्यानडामा ११.४ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् । यसरी अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या तीन लाखबाट पाँच लाख बढी पुगेको छ जुन ७५ प्रतिशत वृद्धि हो । तर अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले तिनुपर्ने कलेज शुल्क भने २० हजार डलरबाट २७ हजार पुर्याइएको छ जुन ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । तर शुल्क वृद्धि भइरहेपनि त्यस अनुरुप सुविधा र सेवाहरुमा सुधार नआएको विद्यार्थीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । यस्तोमा क्यानडा वास्तवमै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न प्रतिबद्ध छ भने यसले विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँ पुगेपछि काम गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै स्कुलहरुले वर्षवर्षमा कति शुल्क बढाउने भन्नेबारे पनि सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्ने विश्लेषक बताउँछन् । बांग्लादेशका एक विद्यार्थी काजी मृदुल भन्छन्, ‘शिक्षाप्रति हामीलाई कुनै असन्तुष्टि छैन तर कहिलेकाहिँ उनीहरुले एकैपटक १० देखि १२ प्रतिशत शुल्क बढाइदिन्छन् । जसले सटिक बजेटमा चल्ने परिवारलाई ठूलो धक्का दिने गरेको छ ।’